Nayakhabar.com: प्रधानसेनापतिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा केरमेट, एक वर्ष उमेर घटाइयो के हो रहस्य ?
प्रधानसेनापतिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा केरमेट, एक वर्ष उमेर घटाइयो के हो रहस्य ?
काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो उमेर एक वर्ष सच्चाएको प्रमाण फेला परेको छ । १ मंसिर २०१६ मा जन्मिएका क्षत्रीले प्रधानसेनापति हुन प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)को मार्कसिट र प्रमाणपत्रमा १ मंसिर २०१७ बनाएको खुलासा भएको हो ।
क्षत्रीले तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ‘मार्क रजिस्टर’मै केरमेट गरी एक वर्ष उमेर सच्चाएका हुन् जसमा १ मंसिर २०१६ लाई केरेर १ मंसिर २०१७ बनाएको देख्न सकिन्छ । क्षत्रीको उमेर सच्याइएको व्यहोरा ‘मार्क रजिस्टर’ को माथिल्लो भागमा पनि उल्लेख छ हेर्नुस तस्बिर
परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयबाट ०९ साउन २०७३ मा हामीले ल्याएको मार्कसिट र प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिलिपी अनुसार क्षत्रीले शान्ति विद्या गृह, काठमाडौंबाट तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
(यो सामाग्री खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि सरोजराज अधिकारीले तयार पार्नुभएको हो ।)